रक्त कोषिका छुट्याउने प्लाज्मा फेरेसिस मेसिनबारे जानौँ
बैशाख २०, २०७४ बिहिवार ००:२३:४४ प्रकाशित
सिभिल अस्पतलले बोनम्यारो प्रत्यारोपणका क्रममा 'स्टिम सेल' झिक्न प्रयोग गर्दै आएको 'प्लाज्मा फेरेसिस मेसिन'बाट अन्य रोगका लागि पनि सेवा सुरु गरेको छ।
एक वर्षअघि ल्याइएको यो मेसिनको प्रयोग बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि मात्र हुँदै आएको थियो। अब भने किड्नी प्रत्यारोपण, सिकलसेल एनिमिया, नशाका बिरामी, ड्रगओभर डोज लगायत विभिन्न उपचारका लागि उपयोग गर्ने सिभिल अस्पतालका रगत रोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौडेलले जानकारी दिए।
रक्तकोषिका सहज ढंगले छुट्याउन प्रयोग गरिने प्लाज्मा फेरेसिस मेसिनले मानव शरीरबाट रातो रक्तकोष, सेतो रक्तकोष र प्लेटलेट्सलाई आवश्यकता अनुसार निकाल्ने र राख्ने काम गर्छ।
यो मेसिनले चाहिने मात्रा प्लेटलेट्स, रातो रक्तकोष वा सेतो रक्तकोष निकाल्ने काम गर्छ। डा. पौडेलका अनुसार यसअघि कुनै बिरामीलाई प्लेटलेट्स आवश्यक परेको खण्डमा जतिवटा आवश्यक छ त्यति मानिसको प्लेटलेट्स झिक्नुपर्थ्यो। यो मेसिनबाट एउटै मानिसबाट बिरामीलाई आवश्यक प्लेटलेट्स सहजै झिक्न सकिन्छ। यो विधिद्वारा रगतबाट प्लेटलेट्स झिकिसकेपछि बाँकी रगत पुरानै ठाउँमा फर्काउन सकिन्छ। यो मेसिनले बोन म्यारोभित्र रगत बनाउने 'स्टेन सेल'लाई सहजै झिक्न सकिन्छ। यसका लागि बिरामीलाई बेहोस बनाउनुपर्दैन। डा. पौडेलका अनुसार स्टेन सेल झिक्नुपर्ने बिरामीलाई पाँच दिनअगाडि औषधि दिइसकेपछि यो विधिबाट सहज ढंगले काम गर्न सकिन्छ।
डा. पौडेल भन्छन् 'नेपालमा यो प्रविधि नहुँदा बिरामीले प्लेटलेट्स नपाएर अकालमै मृत्यु हुने अवस्था थियो। यसले प्लेटलेट्सको उपलब्धतालाई बढी सहज बनाउनेछ।'
प्लेटलेट्स झिक्न यसअघि रगतको समूह पनि मिलाउनुपर्थ्यो। यो विधिमा भने रगतको समूह मिलाउनुनपर्ने र एउटै मानिसबाट सबै काम हुने भएकाले यसलाई 'सिङ्गल डोनर सिस्टम' भनिन्छ।
प्लाज्मा फेरेसिस मेसिनबाट सर्पले टोकेपछि दिइने औषधिको ओभरडोज भएका बिरामीलाई पनि उपचार गर्न सकिन्छ। यसले बिरामीको शरीरको प्लाज्मा झिकेर त्यसमा टाँस्सिएर बसेको औषधिको ओभरडोज छुट्टाएर शरीरबाट बाहिर निकाल्ने काम गर्छ।
यस्तै, यो विधिबाट शरीरमा अनावश्यक 'एन्टीबडी' बाहिर निकाल्ने र आवश्यक एन्टीबडीलाई मात्र शरीरमा राख्ने काम गर्न पनि सकिने डा. पौडेलले जनाए। उनले भने, 'रगत र नशा सम्बन्धी जटिल र झन्झटिलो उपचार पद्दतिलाई यो मेसिनले सहज बनाइदिएको छ।'